Profile Glass hooseeya U / Warshadaha Nidaamka Quwada Awoodda Dhalada ee Glass iyo soosaarayaasha | Yongyu
Nidaamka Jiilka Awoodda Dhalada ee Ulass Glass / U Channel Glass
Birta yar ee aaladda u samaynta muraayadaha korantada muraayadda dhalada ah (UBIPV) waxay isku daraysaa faa'iidooyinka dhismayaasha muraayadda u gaarka ah ee U profile iyo nidaamka abuurista tamarta qorraxda si kor loogu qaado ilaalinta deegaanka cagaaran iyo hoos u dhigida tamarta iyo yareynta qulqulka. UBIPV iyo magaalada waa la iskugu dari karaa si sawirka loo sameeyo qayb ka mid ah nolosha aadanaha. Kaliya maahan shey dhisme ah, laakiin waxay sidoo kale gaari kartaa ujeedooyin keydinta tamarta iyo tamarta dhalinta, sidoo kale waxaa lagu dari karaa si dabiici ahaan ah darbiga daahyada iftiinka, galaaska korantada, iyo nidaamyada kontoroolka caqliga leh. Si loo xaqiijiyo qiimaha cagaaran ee lagu daray iyo qiimaha sare ee dhismayaasha lana hagaajiyo tayada guud ee dhismayaasha, UBIPV waa jihada horumarka ee dhismayaasha cagaaran mustaqbalka.
Qalabka dhismaha awoodda muraayadda U UIPIP waa la soo ururin karaa ama la habeyn karaa, taasoo si wax ku ool ah u yaraynaysa qaybaha qaab dhismeedka lagu rakibay dhismooyinka iyo nidaamyada dhalinta tamarta qorraxda, waxay yareyneysaa kharashaadka alaabada iyo kharashaadka dayactirka shaqaalaha, waxayna wanaajisaa waxqabadka iyo adeegsiga dhameystiran ee dhismayaasha .
(UBIPV) dhismeyaasha jirka
Awoodda farsamada: 700-900N / mm2; duufaanka ka dib> 1800 N / mm2;
Adkeynta Mohs: 6-7
Modulus of barti: 6000-7000 N / mm2;
Isku-darka fidinta khadadka (heerkulka kor u kaca 1 darajo Celsius): 75-85 × 10-7;
Deganaanshaha kiimikada: 0.18mg;
Ku-wareejin: rakibida caadiga ah ee alaabada-wanaagsan, safka cad ee khafiifka ah 91%; xirmo labalaab ah 80%;
Hee-ku-wareejinta Heat: isku rakibidda hal-tallaabo <4.9 W / ㎡ · K, rakibid laba-laab ah <2.35 W / ㎡ · K, rakibaadda laba-lakab ka dib laanta <2 W / ㎡ · K;
Awoodda adkeynta codka: isku xirid hal saf ah ayaa hoos loo dhigay 27db; xirmo laba jibaaran hoos u dhigay 38db; lasaaray layn labajibaar oo la yareeyay in kabadan 40db;
Xadka adkeysiga dabka: 0.75h;
Qalabka dhismaha ee muraayadaha awoodda muraayadaha ayaa loo isticmaali karaa dhismayaasha saqafka, dhisidda darbiyada codka derbiyada dhawaaqa derbiyada, jidadka waaweyn, guryaha saqafka leh, hoyga kuwa caqliga leh, meelaha baabuurta la dhigto ee caqliga leh, daaqadaha beeraha, saqafyada villa, derbiyada guryaha, iyo qolalka jiifka;
1) Xoog sare, sheyga wuxuu leeyahay awood dhisme oo aad u sarreysa iyo xooga walaxda, wuxuu u adkeysan karaa in kabadan 100Kg / m2, ma fududa in la ciladaysiiyo, wuxuuna u adkeysan karaa cadaadiska barafka iyo roob barafka. Si la mid ah qaab dhismeedka bir-ka kanaalka, waxay u adkaysataa cadaadiska dabaysha waxayna ka ilaalisaa dilitaanka qolka.
2) Qaab ma leh, cillad PID ma leh. Naqshadda R-xaglaha ee muraayadda waxay ka hortageysaa nalka inuu xannibo jir-dhaqameedka, wuxuu hagaajiyaa korantada sawir-qaadaha subaxa iyo fiidka, wuxuuna dheereynayaa waqtiga shaqada ee korantada.
3) Waa la tuman karaa, looma baahna in la rogo kanaalka. Rakibaadda nidaamka soo saarista tamarta qorraxda ee caadiga ah waxay u baahan tahay inay keydiso kormeerka iyo kanaalada dayactirka. Qalabka dhismaha ee muraayadaha U-qaabeeya awoodda tooska ah ayaa looga saari karaa rakibaadda iyo dayac-tirka, taas oo kordhinaysa awoodda la rakibay aag unug 50% marka la barbar dhigo qaab-dhismeedka dhul-dhaqameedka.
4) Biyo-xireyn qaab-dhismeedka. Biyo-xareynta asalka ah ee biyuhu waxay sii yaraynaysaa qiimaha dayactirka mana u baahna kala-goyn ballaaran iyo dayactir. Dayactirka iibka ka dib waa mid fudud oo dhakhso leh.
5) Iyada oo leh qaabkeeda feeraha ee loo xoojiyay, looma baahna qaanso qaab dhismeedka bir ah, badbaadinta shaqaalaha iyo alaabada. Qiimaha guud wuxuu la barbar dhigayaa darbiyada daahyada dhaqameed.
6) Soo laabashada maalgashiga ayaa sarreysa qolka abuuritaankauna waa badan yahay. Aaladaha samaynta muraayadaha korantada ee qaab-dhismeedka dhalada waxaa si toos ah loogu isticmaali karaa dhismayaal difaac dibadda ah, sida saqafyada, lakabyada dahaarka iyo darbiyada dibedda. Hal-maalgashi hal mar ah, dakhli ka yimaada jiilka korantada ka weyn 30 sano.
7) Is-nadiifinta. Ayadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyadda is-nadiifinta sare, waxay si otomaatig ah uga saari kartaa boodhka illaa toban sano, yareynta qarashyada dayactirka maalinlaha ah.
8) Tayo xasiloon iyo nolol shelf dheer. Nidaamku wuxuu leeyahay dammaanad 5-sano ah iyo qaybaha waxay leeyihiin damaanad 10-sano ah. Dammaanad 90% awooda lagu qiimeeyay 10 sano gudahood iyo 80% awooda lagu qiimeeyay 25 sano gudahood.
9) La socodka meel fog. La soco xaaladda shaqo ee nidaamka tamarta qorraxda waqtiga dhabta ah.
10) Haysashada caaryada wax lagu xardho, hufnaanta wax soo saar sare.
Hore: Profile Glass & Ceramic Frit & Qabow-Ku-U hooseeya E Profile Glass / U Dhalada Muraayadda
Xiga: Nidaamka Glass Profile Glass / Nidaamka Glass Nidaamka
Muraayadaha U Profile Glass
Muraayada U Profile Glass 2019
U Faahfaahinta Muraayadaha Muraayadaha
Kala jeexjeexan & Sheeraha dhoobada & barafka-hooseeya E ...
Muraayadda Muuqaalka Sare ee Muraayadda / Ulaha Glas ...